XOG:- Farmaajo iyo Jawaari oo kala furfur ku wada Mooshinkii ka dhanka ahaa….. – Kismaayo24 News Agency
XOG:- Farmaajo iyo Jawaari oo kala furfur ku wada Mooshinkii ka dhanka ahaa…..
by admin 14th April 2017 053
Dib u dhac iyo caajis badan ayaa hareeyay mooshinkii Baarlamaanka Soomaliya ee looga horjeeday saldhigga milteri ee Imaaraadka Carabta laga siiyay magaalada Berbera, maamulka Somaliland.
Mooshinka oo Baarlamaanka laga hor akhiriyay ayaa doodiisa la hakiyay sababo aan la garaneyn, waxaana warar xog-ogaal ah ay sheegayaan inuu jiro qorshe mooshinkaasi looga takhalusayo.
Arrintan ayaa ka danbeysay kulan uu safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya Maxamed Axamed Alcusmani la yeeshay guddoomiyaha Baarlamaanka Prof. Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) oo la isku afgartay in hoos loo dhigo mooshinka.
Wararka waxay intaasi ku darayaan in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo uu la socdo arrintan iyadoo ay ka mid ahayd arrimihii laga dhaadhiciyay intii uu socdaalka ku joogay Imaaraadka Carabta.
Dhiciseynta mooshinka looga horjeedo saldhigga Berbera ee Imaaraadka loo saxiixay ayaa isu bedelay mid ay madaxda Soomaalida is afgarad hoose oo aan la shaacin kala gaareen Imaaraadka,
Maxamed Cisman Jawaari wa shaqsi la wada yaqaan balse Dad badan oo Somaali ah ayaa waxay is waydiinayaan halka ay ka baxday wadaniyaadii Farmaajo uu sheegan jiray xiligii uu u tartamayay Madaxweynenimada Somalia.
DEG DEG: Xiisad kulul oo u dhaxeysa galmudug iyo puntland oo laga soo sheegaayo galkacyo kadib markii……
Dhagayso Maamul Goboleedyada iyo Dowlada dhexe oo sadex qodob isku…..
Daawo Muuqaal: Maxaad kala Socotaa Qorsha Shidaal qodis ah oo ay wado Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta ee Xukuumadda Soomaliya
Mungaaboow: Muqdisho magangali!
Ciidamada Dowlada oo Howlgal ka fuliyay Dagmada Baardheere.
admin 22nd June 2015 27th August 2015